Mauritius waxay soo afjartay karantiilkii dalxiisayaasha lagu tallaalay tallaalada la oggolaaday
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mauritius » Mauritius waxay soo afjartay karantiilkii dalxiisayaasha lagu tallaalay tallaalada la oggolaaday
Guddiga Dalxiiska Afrika • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Mauritius • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Mauritius waxay soo afjartay karantiilkii dalxiisayaasha lagu duray mid ka mid ah siddeed tallaal oo la oggolaaday COVID-19
Faafida ayaa burbur weyn ku keentay dhaqaalaha qaranka. Intii lagu jiray sanad -maaliyadeedka ugu dambeeyay, wax -soo -saarkiisa ayaa hoos u dhacay 15%. Shaqo kasta oo afaraad ah oo ka dhacda Mauritius waxay la xiriirtaa dalxiiska, iyada oo saamigeeda GDP -ga ay gaareyso 24%.
Mauritius ayaa gabi ahaanba xuduudo u xidhay dalxiisayaasha ajnabiga ah bilowgii masiibada bishii Maarso 2020.
Mauritius waxay dib u furtay xuduudaheeda bishii Luulyo 15, 2021, laakiin dhammaan dadka cusub ee ajnabiga ah waa inay maraan karantiil 14 maalmood ah.
Sputnik V ee Ruushku sameeyay waa mid ka mid ah siddeed tallaal oo ka dhan ah coronavirus oo jasiiraddaas laga ansixiyay.
Mas'uuliyiinta Mauritius waxay ku dhawaaqeen in laga bilaabo Oktoobar 1, dhammaan xannibaadihii dhaqdhaqaaqa dalxiisayaasha lagu tallaalay mid ka mid ah siddeed tallaal oo ka dhan ah coronavirus oo la oggolaaday jasiiradda.
Xuduudaha Mauritius gabi ahaanba waxay u xidhnaayeen dalxiisayaashii ajaanibta ahaa markii uu cudurku bilaabmay bishii Maarj 2020. Waxaa dib loo furay July 15, 2021 laakiin, dadka cusub ee soo galay waa inay maraan karantiil 14 maalmood ah. Waqtigan xaadirka ah, xaaladaha joogitaanka dalxiisayaasha ajnabiga ah ee lagu tallaalay tallaalada ay oggolaadeen maamulka maxalliga ah ayaa la dejiyay.
Sida laga soo xigtay wakiilka Safaaradda Ruushka ee Mauritius, Sputnik V ee Ruushku sameeyay wuxuu ka mid yahay siddeed tallaal oo COVID-19 ah oo jasiiradda lagu ansixiyay.
Dalxiisayaasha Ruushka ayaa la tallaalay Sputnik V yimaada Mauritius uma baahna inay ilaaliyaan karantiil maanta laga bilaabo waxayna si xor ah ugu socon kartaa dhulka ummaddan jasiiradda ah, ayuu yiri diblomaasiga.
Horaantii, waxay ahayd inay ku qaataan karantiil laba toddobaad ah dhismayaasha hoteellada, ”ayuu yiri, isagoo raaciyay in la filayo in duulimaadyada tooska ah ee u dhexeeya Mauritius iyo magaalooyinka Ruushka ay dib u bilaaban doonaan mustaqbalka dhow.
Ruushka laga sameeyay Sputnik V tallaalka ayaa si weyn loo adeegsadaa Mauritius. Dufcaddii ugu horreysay waxay dalka timid 30 -kii Juun. Laga bilaabo 12 -kii Luulyo, Sputnik V waxaa lagu isticmaalay waditaanka tallaalka qaranka Mauritius iyo tallaallo kale.
Mauritius waa mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha Afrika marka la eego tirada dadka laga tallaalay cudurka coronavirus. Qiyaastii 1.63 milyan oo tallaal oo ka dhan ah COVID-19 ayaa loo adeegsaday jasiiradda, 788,000 qof ama 62.2% dadweynaha ayaa dhammaystay koorsadii tallaalka oo dhammaystiran.
Faafida ayaa burbur weyn ku keentay dhaqaalaha qaranka. Intii lagu jiray sanad -maaliyadeedka ugu dambeeyay, wax -soo -saarkiisa ayaa hoos u dhacay 15%. Shaqo kasta oo afaraad ah oo ka dhacda Mauritius waxay la xiriirtaa dalxiiska, iyada oo saamigeeda GDP -ga ay gaareyso 24%. Dowladda dalkaasi ayaa higsaneysa inay soo jiidato ku dhawaad ​​650,000 oo dalxiisayaal ah Mauritius 12 -ka bilood ee soo socda.